Madaxweynaha Soomaaliya oo fariinti ugu horeysay u diray Al Shabab - Dhageyso
Madaxweynaha Soomaaliya oo fariinti ugu horeysay u diray Al Shabab – Dhageyso
Updated About:252 days ago 1
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo galabta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa uga hadlay arrimo kala duwan oo aad xasaasi u ah.
Mr. Xasan Sheekh ayaa marki ugu horeysay ka hadlay Xarakada Al shabab iyo mowqifkiisa ku aadan isaga oo u diray fariin.
Xasan Sheekh ayaa Al Shabab u kala qeybiyey labo, oo kala ah dhalinyaro Soomaali ah oo dalka u dhalatay iyo kuwo aan Soomaali aheyn oo uu ugu baaqay in ay wadanka ka baxaan.
“Shabab waa laba qeybood, qeyb waa wiilal Soomaaliyeed dalkaan ayeyna wax ka leeyihiin laakin waxaa loo baahanyahay in ay ka shaqeeyaan waxa maslaaxada dalkaan ku jirto, qaarkood waxay ugu biireen sababo dhaqaale, qaar waxay ugu biireen ciil ay qabaan oo aarsi doon ah, qaar waxay ugu biireen caqiiqdo ahaan iyo qaar kale, waxaa soo haray kuwa aan Soomaalida aheyn kuwaas wax naga dhaxeeya ma jiro, waxa naga dhaxeeya waxa waaye in ay dalkaan ka tagaan,” ayuu yiri.
Madaxweynaha ayaa u sheegay shacabka Soomaaliyeed inuusan wax cafis ah u fidin doonin qof kastaa oo lagu soo xiraa danbi culus, isla markaana ay maxkamad xakunto.
Madaxweyne Xasan Skeekh Shir Jaraa’idkii uu Qabtay Dhageyso “Shacabka Soomaaliyeed waa inuu ogaado in madaxweynaha uusan cafis sameyn doonin, ma dhici doonto biri ayaa ah koowda luulyo, ciid waaye ama munaasabad hebel oo wiilasheena ayaa lasoo deynayaa, qofki ay maxkamad xakunto ogaada madaxweynaha wuu saxiixayaa xakunkaasina waa fulayaa,” ayuu yiri.
Go,aankan ayaa ka hor imaanaya go,aano uu qaadan jiray madaxweynihi hore ee Soomaaliya Sharif Sheekh Axmed oo maalinti ciidul fidriga cafis kusii daayey in ka badan 200 oo maxaabiis ah oo dhamaantood ka tirsanaa Al Shabab.
Hadalka uu maanta jeediyey madaxweynaha ayaa ahaa kii ugu kululaa ee uu warbaahinta siiyo tan iyo marki loo doortay xilkaan Isniinti lasoo dhaafay.
fadumo xaji cilmi says:	September 15, 2012 at 8:36 pm	madxhayene waa arin fiican in wadan ka laga saaro shabaab waan guul taas
madax wayne waxaan kaa cod sanayaa calanka cagaaran oo gees kaaga yaalo ku badal calanka ameerikaan taas ayaa dan noogu jirtaa jaele madax wayne intaas ayaa kaa dhiman
qayr aan ku rajeeyay jale madax wayne guuul